Ị ma otu esi enweta DoLollow backlinks maka n'efu?
Ọ dị mfe ịghọta otú e si enweta backlinks DoFollow n'ọtụtụ. Ma, ihe niile abụghị nke dị mfe ma a bịa n'ịmepụta ndị mma na PR dị elu. Tupu anyị amalite, ebe a bụ ihe a ga-eburu n'uche:
Gbaa mbọ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ gị, adala ọsọsọ na ị ga-enwe ihe ọ bụla n'ime ebe naanị otu abalị.
Adịghị emebiga ihe ọ bụla site na ịmepụta ọtụtụ backlinks na-atụ aka na saịtị gị ma ọ bụ ibute peeji nke, ị ga-enwe ike inwekwu njikọ njikọta ndị ọzọ na-abanye n'ime ọdịnaya nke saịtị gị.
Tupu ị nweta akara azụ ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog, jide n'aka na ị nwere ike ịmezi ma ọ bụ kweta ihe ọ bụla e nyere n'otu oge ọ bụla - black headpieces australia.
Nke a bụ otu ị ga esi nweta backlinks DoFollow na PageRank dị elu, ma e wezụga ịkwụ ụgwọ penny. Gbalịa mee atụmatụ ndị a dị mfe ịchọpụta ihe na-eme:
Nweta backlinks PR dị elu na DoFollow site na weebụsaịtị Microsoft Answer. Ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị mma ijide ụfọdụ backlinks dị mma - niile ịchọrọ bụ iji gwa anyị ihe ngwọta ziri ezi maka otu okwu. N'ụzọ dị otú a, ọ bụghị naanị na ị ga-ebugharị ụgbọala ọzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog, ma gosipụta nka gị, ma mee ka ikike gị dịkwuo ogologo oge. Ihe niile dị nnọọ mfe - enwere ọtụtụ nsogbu ka edozie gị n'ebe ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na azịza gị dị njikere ma dịrị ndụ, ịnwere onwe gị iji nweta akara azụ azụ ahụ kwesịrị ekwesị na-aza ajụjụ ahụ.
Na-esote, ka anyị hụ otu esi enweta backlinks DoFollow site na iji akaụntụ onwe gị na Google Plus. Ebe a na-elekọta ọha mmadụ bụ isi ihe dị mkpa iji jikọta ya na iji profaịlụ gị. Ihe niile ị chọrọ bụ iji banye ma ọ bụ jiri onye ị dịbu. Ọzọ, gaa "banyere" ngalaba ma jupụta ozi niile dị mkpa, ka ejikọta ya na backlink na-atụfe ụzọ gị na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị.Rịba ama, enweghi ihe mgbochi iji tinye njikọ n'ebe ahụ. Ma, ọ ga - akara gị mma ma ọ bụrụ na ị ga - eme ka ha dị ka ọnyà - ọ gwụla ma ịchọrọ ka ihe niile dị ka spam.
Tụlee ịmekọrịta akwụkwọ ndekọ bara uru na ndepụta weebụ. Gbalịa ịnye ụfọdụ n'ime posts gị, isiokwu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mma data nke na-enye ezigbo onye ọrụ. Cheta, Otú ọ dị, na m onwe m na-akwado itinye aka na ndị zuru ezu PageRank akara, malite na ọ dịkarịa ala tier 4.
Ị nwekwara ike ịkwasa ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog site na ịnye ụfọdụ n'ime posts gị kachasị mma, na ntinye na ịza ajụjụ na ngalaba aka nri dị n'ebe ahụ. Nke a bụ otu esi eme ka backlinks DoFollow dị jụụ - gaa na-achọ ụfọdụ ezigbo DoFollow forums - na ị mechara. N'etiti ebe ndị ọzọ dị mma ịnye njikọ, ị nwekwara ike ịkwatu na saịtị ndị a: Dmoz. njikwa; Onemission. njikwa; Inbound. ụdị Infobarrel. com. Ọ bụrụ na ị maghị ebe ị ga-amalite - egbula oge ịnwale otu n'ime ha ma chọpụta ihe ziri ezi.